Midowga Yurub oo taageeray dadaallada Midowga Afrika | KEYDMEDIA ONLINE
Midowga Yurub oo taageeray dadaallada Midowga Afrika
Midowga Yurub oo ka tirsan saaxiibada Soomaaliya ayaa taageeray dadallada ay wadaan Midowga Afrika kuwaasoo lagu doonayo in lagu xalliyo buuqa ka taagan doorashooyinka Soomaaliya, iyagoo si aada ula dhacay diidmada Midowga Afrika ee ku aaddan Muddo kordhinta.
MUQDISHO, Soomaaliya - Bayaan ka soo baxay wakiilka sare ee EU ee arimaha dibada iyo siyaasada amniga Josep Borrell oo ku saabsan xaalada siyaasadeed iyo tan amni ee Soomaaliya ayaa lagu taageeray natiijadii kasoo baxday Shirkii Golaha Nabadda iyo Amniga ee Midowga Afrika ee 22 -kii Abriil ee ku saabsanaa xaaladda siyaasadeed iyo nabadgelyo ee Soomaaliya.
Waxaa lagu tilmaamay go'aan ubaahan soo dhaweyn. "Midowga Yurub wuxuu taageersanyahay diidmada mudo kordhin kasta wuxuuna rajeynayaa in si dhaqsi leh loogu laabto wadaxaajoodka, oo uu fududeeyo ergayga Midowga Afrika, si loo gaaro is afgarad dhanka doorashooyinka ah, iyadoo lagu saleynayo heshiiskii 17 -kii Sebtember 2020." ayaa lagu yiri bayaanka
Midowga Yurub ayaa taageeray shir ay isugu imaanayaan waddamada ay ciidamada ka joogaan Soomaaliya, waxaana lagu yiri bayaanka "Midowga Yurub wuxuu kaloo soo dhaweynayaa baaqa ah in Shirka Wadamada ay Ciidamada ka joogaan Soomaaliya oo lagu qiimeynayo xaaladda amni ee Soomaaliya."
Waxay ballan qaadeen in ay la shaqeyn doonaan Ergayga cusub ee lagu wado in Midowga Afrika uu usoo magacaabo Soomaaliya "Midowga Yurub wuxuu diyaar u yahay inuu si dhaw ulashaqeeyo ergayga midowga africa, dhanka kale, wuxuu codsanayaa degenaansho iyo in laga fogaado talaabo kasta oo kale oo xaalada sii xumeyn karta." ayaa lagu soo gabagabeeyay bayaanka.